तपाईंको आन्तरिक रे लिओटा अंगालो Martech Zone
तपाईंको आन्तरिक रे लिओटा अंगालो
शुक्रबार, अप्रिल 12, 2013 सोमवार, मे 6, 2013 Douglas Karr
जब हामी LA बाट सान फ्रान्सिस्कोको हाम्रो लिओभरमा पर्खिरहेका थियौं, रे लियोटा उडानमा हिंडे। उसले केहि स्टाफहरूसँग कुराकानी ग .्यो र सहकर्मीसँग बसे। यो ती क्षणहरू मध्ये एक हो जुन तपाईंलाई थाहा छैन के गर्नु पर्ने हो ... के हुन्छ? त्यो केटा र फोटोका लागि सोध्नुहोस्? वा के तपाईंले केटालाई एक्लै छोड्नुहुन्छ किनकि उहाँ सायद दिनभर मान्छेहरूले चिन्तित हुनुहुन्छ। म बन्न चाहन्न त्यो केटा… तर म एक विशाल प्रशंसक हुँ। मैले गुडफिलासलाई अनगिन्ती पटक र सपनाको क्षेत्रदेखि अपरेशन डम्बो ड्रप सम्म नरम मार्ने हदसम्म सबै कुरा हेरेको छु।
म ठूलो मान्छे हो त्यसैले म कोचमा पिस्नु र छिमेकीहरूलाई दयनीय बनाउनुको सट्टा पहिलो कक्षा उडान गर्ने। प्लेन लोड भयो र श्री लियोटा १ बीमा बसे र म २ एमा विकर्ण भएँ। मार्टी र जेन सिधा उसको पछाडि बसे। जब हामी उड्नको लागि कुर्दै थियौं, मैले शान्तपूर्वक सोधें कि म श्री लिओटाको फोटो झिक्न सक्छु जब ऊ झोलाबाट केहि लिन बाहिर उभियो। उसको जवाफ यस्तो थियो कि ऊ उनका धेरै चलचित्रहरूबाट एक रेखा पढिरहेको थियो। उसले मलाई आँखामा मृत देखे र भने:
"अहिले?! No! हामी नआउञ्जेल कुर्नुहोस्। ”
म आधिकारिक छु त्यो केटा। म माफी माग्नुहोस् वा केही मूर्ख र म गिलास वाइनको अर्डर गर्दछु। यो १० बिहान छ।
उडान महान छ र मिस्टर लिओटाले केहि मिनेटको लागि जेन र मार्टीसँग कुराकानी पनि गर्‍यो। जब जेनले हामी मार्केटि do गर्छन् भनेर उल्लेख गर्दा, उनी भन्छन कि हामीले आफ्नो नयाँ फिल्ममा शब्द निकाल्नु पर्छ, Iceman। हेरेपछि रिचार्ड कुक्लिन्स्कीको बारेमा HBO विशेष, त्यहाँ कुनै तरिका मैले यो फिल्म हराइरहेको छु।
उडानमा फिर्ता श्री लिओटा उतरबाट २० मिनेट टाढा उठ्नुहुन्छ र पहिलो श्रेणीको केबिनमा च्याट गर्दै र मान्छेहरूसँग तस्बिर खिच्दै हिंड्नुहुन्छ। ऊ मतिर झुकाउँछ र बाहिर फ्लटले मलाई भन्छ कि मैले मेरो तौलको बारेमा केहि गर्न आवश्यक छ ... कि म मर्न जाँदैछु यदि मैले यसबारे केही गरेन भने।
"के तपाई कुनै आकारका पुराना व्यक्तिलाई चिन्नुहुन्छ?"
म केहि बढी गनगन गर्छु।
त्यसपछि ऊ मेरो काखमा हाम फाल्छ र मलाई गालामा चुम्बन गर्छ। केबिनमा सबैले हाँस्दछन् र मार्टीले फोटो लिन्छन्:
कथा त्यहाँ अन्त्य हुँदैन, हामी पनि भेट्छौं र उहाँसँग कर्बसाइडसँग कुरा गर्छौं ... ऊ निराश थियो कि उसको सवारी आएको थिएन र मान्छेहरू भीडमा डुब्न थाले। हामीले अर्डर गरे उबरबाट लिमो र एक ठूलो ओएल 'कालो फोर्ड अभियान रोल अप भयो। हामीले श्री लियोटालाई एयरपोर्टबाट टाढा जान सवारीको प्रस्ताव राख्यौं। उनले साँचो रूपमा हामीलाई धन्यवाद दिए तर टर्मिनलमा फर्केर यसलाई टाँस्ने निर्णय गरे। हामी बिदाइ भन्छौं र फोटोहरूका लागि उनलाई फेरि धन्यवाद दिन्छौं।
वाह। कस्तो दिन!
मार्टी, जेन र म के भयो भनेर कुरा गर्न रोक्न सकेन। अझ, हामी विश्वास गर्न सक्दैनौं कि श्री लियोटासँग कसरी भेट्ने र कुरा गर्ने भन्ने कुरा हामी ठूलो स्क्रिनमा देखेको कुराको झलक हो। ऊ अगाडि, पारदर्शी छ, र उसले के सोचिरहेको छ भन्दछ। कुनै फिल्टर थिएन ... मेरो मतलब हो कुनै फिल्टर छैन। म अब श्री लियोटाको एक विशाल प्रशंसक मात्र होइन, म वास्तवमा उनलाई सम्मान गर्छु र हामीले उसलाई भेट्यौं छोटो झलक को लागी केटा सम्मान गर्दछु।
मसँग उमेर बढ्दै जाँदा मसँग धेरै फिल्टर छैन। जब व्यक्तिहरूले मलाई प्रश्नहरू सोध्छन्, तिनीहरू कहिले काँही ईमानदारीको साथ आश्चर्यचकित हुन्छन् जुन मसँग प्रतिक्रिया गर्दछु। यो त्यस्तो होइन कि म ज्यादै जाँदैछु, तर म प्रायः त्यस्तै आउँछु। मलाई लाग्छ धेरै मानिसहरु के सोचिरहेका छन् भन्न को लागी क्षमता हराएको छ। हामी एउटा निष्क्रिय आक्रामक समाजमा बाँचिरहेका छौं जहाँ मानिसहरू तपाईंको हात हान्छन् र तपाईंलाई अंगालो हाल्छन्, त्यसपछि भाग्नुहोस् र तपाईंको पछाडि पछाडि तपाईंको बारेमा कुरा गर्नुहोस्।
मेरा नजिकका साथीहरूको बाहिर, त्यहाँ धेरै व्यक्तिहरू छैनन् जसले मलाई मेरो वजनमा मुठभेड गर्छन्। मलाई खुशी छ श्री लियोटाले गरे… यो यात्राले मलाई मारे। होटेलको कोठामा म दुखेको छु वास्तवमा - स्यान फ्रान्सिस्कोमा बाहिर लेख्नुको सट्टा अविश्वसनीय मौसमको आनन्द लिँदै यसमा लेखिरहेको छु। जब म इन्डीमा फर्कन्छु, म मेरो बाइक र्याक स्थापना गर्दैछु र हाम्रो अफिसको लागि केही माईल यात्रा सुरु गर्दैछु। मैले यो पहिलेदेखि नै गर्ने योजना गरिरहेको थिएँ, तर श्री लियोटाको कुटिलताले मसँग मुद्दा जोड्न मद्दत गर्‍यो।
तपाईको भित्री रे लियोटा अँगालो।
हामी सबै अझ इमान्दार हुनु पर्छ। हामी फोनिलो संसारमा बाँचिरहेका छौं ... अगाध खाडलमा उड्दै किनभने कोही पनि एक अर्कासँग इमानदार हुन चाहँदैनन् - हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रो सरकार, हाम्रो मार्केटिंग र हाम्रो व्यवसाय जस्ता। यदि श्री लियोटाले मलाई उडानमा केहि सिकाउनुभयो भने, यो थियो सधैं इमानदार र खोल्नुहोस्।
टैग: रे लिओटा
ब्रान्ड अधिवक्ताको विरुद्ध प्रभाव पार्ने आउटरीच
अप्रिल 12, 2013 मा 12: 15 PM
धेरै राम्रो डग। ध्यान दिएर सल्लाह ... मैले महसुस गरेको छु तपाईंसँग कुराकानी गर्न राजी हुनुमा म धेरै बेर लागेको छु। मैले त्यसो गर्नु आवश्यक छ ... र साथै "सॉस खन्याउँदै"
अप्रिल 12, 2013 मा 4: 29 PM
उत्कृष्ट पोष्ट डग (सामान्य रूपमा) तपाईको अफिसमा केहि माईल यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ? के तिमी सरेका छौ? कार्यालय सारियो? मलाई विश्वास छ कि यो ग्रीनवुडबाट डाउनटाउन इन्डीको १ 15 माईलको दूरीमा छ। मलाई फेरि बाइकमा चढ्नु पर्छ। वास्तवमा भर्खर ग्रे बकरी खेल रोकेर बाइकमा हेरेर घर पुग्यो। म जुलाईमा RAIN को लागी प्रशिक्षण लिने छु। महत्त्वपूर्ण प्रकारको त्यो गर्नको लागि एक राम्रो बाइक छ।
अप्रिल 12, 2013 मा 4: 42 PM
हामी सार्न सकेन, जेसन। मसँग बाइक र्याक स्थापना भएको छ त्यसैले म सांस्कृतिक ट्रेलमा पार्क गर्न सक्दछु, त्यसपछि अफिसमा सवारी गर्न सक्दछु। राम्रो सामान!
अप्रिल 12, 2013 मा 5: 03 PM
अह! यसले यसको वर्णन गर्दछ! म अझै र्याकको आवश्यक छ र अफिसमा साइकल चलाउने बीचको सम्बन्ध पत्ता लगाउन कोशिस गर्दै थिएँ। धेरै सुन्दर!
अप्रिल 15, 2013 मा 6: 10 एएम
कस्तो ठिक! म प्रख्यात व्यक्तिहरूको वरिपरि सधैं लजालु छु। तर किन? तिनीहरू केवल PEOPLE, सही! हो तपाईका लागि मान्छे! ऊ वास्तविक चरित्र जस्तै लाग्छ!
मई 6, 2013 मा 10: 12 एएम
अद्भुत रमाईलो, इमानदार र कमजोर लेख डग्लस। तपाइँ भएकोमा धन्यवाद। म वास्तविक तपाईंलाई चिन्न अगाडि हेर्छु। र, जीवनको जीवन कस्तो हुनु आवश्यक छ भन्नेको एक उत्कृष्ट उदाहरण ... तपाईको साँचो आत्म हुनु।
मई 6, 2013 मा 10: 15 एएम
धेरै सराहना गरियो @ facebook-100000206689471: डिस्क!